Qabsoo Hadhaa’aa Fi Adeemsa Demokraatawaan Filannoon Dura Taa’aa ADWUI Geggeessame:Pireezdant Lammaa
Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa yeroo filamuu Dr. Abiy laachise OBN irratti ibsa kennan, Kamisa, Bitootessa 29, 2018
Manni maree paartii biyya bulchu kan Itiyoopiyaa Dura ta’aa ADWUI kan turan obbo Haylamariyaam Dassaalenyiin kan bakka bu’an dura taa’aa Dhaabbata dimokrtaatawaa uummata Oromoo Dr. Abiyyi Ahimediin dura taa’aa isaa gochuun filatee jira.
Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas Dr. Abiyyi dura taa’aa addichaa ta’uun filatamuu fi jijjiirraa taasisame ilaalchisuun kaleessa OBNf ibsa kennanii jiru. Prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa magarsaa OBNf ibsa kennaniin filanoo kun karaa dimokraatawaa ta’een geggeessame, qabsoo hadhaa’aas nu gaafate jedhan.
Itti gaafatamni guddaan Dhaabbata Dimokraatawaa Uummata Oromootti kenname kun kan uummati keenya yeroo dheeraaf gaafataa ture kan jedhan prezidaant Lammaan, bu’aa qabsoo uummata Oromootu dhaaba keenya asiin ga’ee, sabaa fi sab lammoonnis dhaabbati dimokraatawaa uummata Oromoo biyyattii hoogganuu danda’a jedhee itti amnuu dhaan itti gaafatama kana nutti kennuu isaaf ni galatoomsanna jedhan prezidaant Lammaa Magarsaa OBNf ibsa kennaniin.
Kaan horii qalee eebbifate, kaan gammachuun karaatti baafate, ka hujuma isaa laalla jedhullen hedduu, Dr.Abiyyi Ahmed garaa lamaan eegatan
Dr. Abiyyi Ahimed Wixata Dhufu Kakatanii Muummicha Ministaraa Tahan
Paartiin Biyya Bulchu Kan Itiyoophiyaa Hoogganaa Haaraa Filate
Dura-teessummaa ADWUI-tti Filatamuu Dr. Abiyyi Ahimed Paartiin Mormituu fi Xiinxaltoonni Maal Jedhu?
Dr. Abiy Ahimad dura ta’aa ADWUI Ta’anii Filataman